Umshini womshini wokugaya ummbila ngenjini yedizili egaya okusanhlamvu kommbila
Umshini womshini wokugaya ungaqhuqha ummbila,ukolweni,ithanga, ilayisi no-soya,upelepele,izinongo,nesiqu sezitshalo ezomile, ukhuni womlilo, utshani belayisi, i-clover, amagobolondo amantongomane, usisi welayisi njll .Usayizi wokugcina wezinto ezisetshenzisiwe zingaguqulwa ngokuya ngezidingo zamakhasimende. Lo mshini wokugaya ummbila wedizili wenziwe ngesakhiwo se-fulll-iron,ingxenye eseleyo yomshini we-corn grinder yamukela ngokuphelele impahla esezingeni, izingxenye zokuphuma zamukela imikhiqizo efanelekile yasekhaya.Lomshini we-grinder wommbila ungalingana nohlaka ,amasondo ngokwezidingo zakho .Sinomshini we-diesel corn grinder waseKenya,futhi amanye amakhasimende afuna kakhulu lo mshini wokugaya ummbila wedizili,njengeSenegal ,IGambia,Mali,IBurkina Faso,ISierra Leone,IGhana,I-Nigeria njll.
1.Lolu hlobo lomshini we-corn grinder lusetshenziswa kabanzi kuzo zonke izinhlobo zeziqu zezitshalo, ukhuni womlilo, utshani belayisi, i-clover, amagobolondo amantongomane, irayisi husk ukotini wembewu uvolo, njll.
2 Lolu chungechunge lomshini wokugaya okusanhlamvu kommbila unethuba lesakhiwo esihle, iqinile futhi iqinile, iphephile futhi ithembekile, ukusebenza okulula,lula ukuyisebenzisa .
3 Umsindo ophansi nomshini wokugaya ummbila, ukusebenza kahle okuphezulu nokusetshenziswa kwamandla okuphansi. Ngomgodi wokuphonsa kabili ukuxhuma izinto.
4.Kokubili ukugaya ama-coarse nokuhle kungabonakala ngokulungisa isisetshenziswa somshini wokugaya ummbila.
Ukusebenza kwesisekelo somshini wokugaya ummbila
Umshini wokugaya ummbila wamukela ukwehla komthelela, impahla egumbini lokuqunjelwa ngemuva kokushintshwa kwesivinini esikhulu sesando kuchotshoziwe, umkhiqizo oqediwe mncane kunosayizi wemeshini, ukuhamba komoya okukhiqizwa yi-blower ukukhipha impuphu.
Lo mshini wokugaya ummbila nawo ungenziwa ngokwezifiso ,senze umshini wokugaya okusanhlamvu okusansimbi kungenye yamakhasimende ethu.
Amapharamitha obuchwepheshe womshini wokugaya ummbila